Maoritania: Tafihan’ny Mpitandro Ny Filaminana Ny Mpanohitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Mey 2012 10:31 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, عربي, Português, Ελληνικά, English
Nanangana tranolay sy nitondra tahirintsakafo sy sinin-drano, ary hitoetra eo, ny mpanohitra izay miantso ny hionganan'ny fitondrana miaramila. Io no hetsika sit-in ataom-bahoaka nomanin'ny antoko mpanohitra rehetra mbamin'ny mpikatroka sy ny vondro-piarahamonina maro.
Manohitra hisian'ny fanavaozana ara-politika sy ara-toekarena ny Maoritaniana, efa mihoatra ny herintaona izay, ary mba hifarana koa ny fitondra-miaramila. Novelabelarina fa tonga eo amin'ny sehatra mangotraka ny firenena.
Milazalaza izay nitranga nandritra ny marainan'ny 3 mey ny mpikatroka an-tserasera Anita Hunt:
Taorian'ny nanapahana ny jiro sy nibahanana ny lalana mankany amin'ny faritra manodidina ny toerana anaovana sit-in, dia andiana fiara 30 sy baomba mandatsa-dranomaso maro, baomba mankarenintsofina, ary tafondron-drano no nanondraka ny toby. Nanafika sy nidaroka ny mpanao fihetsiketsehana niezaka ny handositra avy eo ny polisy. Maro dia maro ny olona naratra ary ampolony ny olona nosamborina raha naharitra adiny roa mahery ny fifandonana. Nahitana izao manaraka izao tamin'ireo naratra : mpitarika antoko mpanohitra iray, talen'ny mpanohitra iray hafa, ao amin'ny biraon'i Ould Daddah; mpanao gazety am-bava tsy miankina iray; vehivavy bevohoka iray izay velona ihany taorian'ny baomba mandatsa-dranomaso saingy manam-pahasahiranana lalina dia lalina eo amin'ny fisefoana; ary tanora iray tratran'ny ratra anaty. Noraofin'ny polisy ny fitaova-patoriana sy ny fitaovana elektronika ary ny tahirin-tsakafo tao an-toerana, ary afaka kelikely nifampizaran-dry zareo ny sakafo sy ny rano fisotro. Nopotehin'ny polisy avokoa izay tsy zakan-dry zareo bataina vetivety – toy ny latabatra, seza sy ny fitaova-pidiovana. Nisy aza moa ny tatitra vitsivitsy milaza fa nahatsikaritra ny filoha Aziz sy ny mpiambina akaiky iray teny amin'ny manodidina nanara-maso manokana ny fanafihana. Nivory tao amin'ny lapam-panjakana ny filan-kevitry ny minisitra ny maraina efa ho atoandro, raha nanafika ny anjerimanontolo ny polisy ary misambotra mpianatra maro. Tsy nisy ny filazana momba ny fihetsiketseham-panoherana na momba ny fanafihana taorian'ny filankevitra.
Nanoratra ny bilaogera Maoritaniana Ahmed Jedou:
Nandray anjara tamin'io sit-in io avokoa ny ao amin'ny fanoherana rehetra ao Maoritania: Ny antoko politika rehetra, ny fiaraha-mientan'ny tanora tahaka ny Hetsika 25 Febroary [ar] izay nanomana fiaretan-tory hiantsana tononkalo sy hamerimberenana ny tarigetra nandritra ny volana maro “Miala, miala ny fitondra-miaramila”, izay nolazalazain-dry zareo hatramin'ny niatombohan'ny Lohatao Arabo.
Milaza ny heviny ny mpikatroka Maoritaniana mipetraka any Etazonia Nasser Weddady:
@weddady: nahavita ezaka nahahetsika ny vahoaka maro i #Maoritania ‬na dia vitsy mponina aza, araka ny hita tamin'ny fipoiran'ny hetsi-panoherana tao anatin'ny herintaona. Montsana ny zava-bita tsara indrindra amin'ny lafiny rehetra
@weddady: Ho hitantsika ankehitriny ny hataon'ny mpanohitra tamin'ny fidarohana ny besinimaro. Aza dia manantena loatra ny hahita momba azy ity eny amin'ny tontolon'ny fampitam-baovao.
Ity lahatsary [ar], nakarin'i ahmedj85, no ahitana ny sit-in tamin'ny 2 Mey:
Ahitana ny fanafihana sit-in ny maraimben'ny 3 mey kosa indray lahatsary [ar] manaraka, nakarin'i alaakhbarinfo: